Ukucoca iikontraki e-Connecticut
Uluhlu lweeNtengiso zePropathi: Business Directory Ukucoca Abakhi Connecticut
Inkonzo yokucoca iBurgos
Inkonzo yokucoca iBurgos igxile kumacandelo orhwebo, ococeko kunye neofisi. Ukusebenzela ilizwe lonke e-Connecticut nakwimimandla ejikelezileyo siyazingca ngokubonelela ngeyona nto iphambili kunye nexabiso leemfuno zenkonzo yakho yokucoca. Siqinisekile ukukunika i-100% ulwaneliseko.
umbono Ukucoca Abakhi ishicilelwe kwiinyanga 3 ezidlulileyo
ukucoca yinkqubo yokukhupha izinto ezingafunekiyo, ezinje ngomdaka, iiarhente zosulelo, kunye nokunye ukungcola, kwinto okanye kwindalo. Ukucoca kwenzeka kwiimeko ezahlukeneyo, kwaye kusetyenziswa iindlela ezininzi ezahlukeneyo. Imisebenzi eliqela inikezelwe ekucoceni.
I-Connecticut ((mamela)) lelona lizwe lasemazantsi kwingingqi yase-New England e-United States. Njengobalo bantu lwe-2010, inowona mvuzo uphezulu we-per capita, i-Human Development Index (0.962), kunye nengeniso yekhaya e-United States. Umda umda yiRhode Island ukuya empuma, iMassachusetts emantla, iNew York ngasentshona, kunye neLong Island Sound emazantsi. Idolophu enkulu yayo yiHartford kwaye eyona dolophu inabemi baninzi yiBridgeport. Yinxalenye ye-New England, nangona iinxalenye zayo zihlala zihlelwe ngamaqela yiNew York kunye neNew Jersey njengendawo ye-Tri-state. Lo mmandla ubizwa ngokuba nguMlambo i-Connecticut, othi iphantse ibambe ilizwe. Igama elithi "I-Connecticut" lisuselwa kupelo lwegama elingafaniyo le-Algonquian elithetha "umlambo omde omileyo" .Indawo yokuhlala yaseYurophu yokuqala yayingabahlali baseDatshi abasungula indawo encinci, ehlala ixeshana ebizwa ngokuba yiFort Hoop eHartford kwisivumelwano sePaki neConnecticut Imilambo. Isiqingatha seConnecticut ekuqaleni sasiyinxalenye yeDutch colony New Netherland, eyayibandakanya umhlaba omninzi phakathi kweConnecticut kunye neDelaware imilambo, nangona iindawo zokuqala eziphambili zasekwa kwii1630 ngamaNgesi. UThomas Hooker wakhokela iqela labalandeli abasuka kwiMassachusetts Bay Colony kwaye baseka i-Connecticut Colony; abanye abaphambukeli abavela eMassachusetts baseka iSybrook Colony kunye neNew Haven Colony. I-Connecticut kunye ne-New Haven colonies iseke amaxwebhu emiMiselo yesiKhokelo, athathela ingqalelo ubume bokuqala eMelika. Kwi-1662, iikholoni ezintathu zidityaniswe phantsi kweshishini lasebukhosini, okwenza i-Connecticut yakuba sisithsaba sesithsaba. Le yayiyenye yeKhonkco ezilishumi elinantandathu eyala urhulumente wase-Bhritane kwi-American Revolution. I-Connecticut lelizwe lesithathu elincinci ngokwendawo, i-29th ininzi, kwaye yeyesine enabemi kakhulu be-50. Yaziwa ngokuba yi- "Constitutional State", "Nutmeg State", "Providence State", kunye ne "Land of Steady Habits". Inempembelelo kuphuhliso lukarhulumente wase-United States (jonga kwiConnecticut Combise). UMlambo i-Connecticut, uMfula iThames, kunye namazibuko ajikeleze iLong Island Sound anike iConnacicut isiko elinamandla laselwandle eliqhubeka nanamhlanje. Urhulumente unembali ende yokusingatha ishishini leenkonzo zemali, kubandakanywa neenkampani zeinshurensi eHartford kunye neengxowa-mali zeheedge eFairfield County.